NTC को नेटवर्क नहुँदा NCEll लाई मारामार फाइदा, सरकारी संयन्त्र कम्जोर
सेप्टेम्बर 27, 2019 सेप्टेम्बर 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, नेटवर्क
असोज १०, नवलपरासी । NTC को नेटवर्क नहुँदा NCEll लाई मारामार फाइदा, सरकारी संयन्त्र कम्जोर ! मध्यविन्दु नगरपालिकामा २०७६ साल पुस ९ देखि NTC को नेटवर्क नहुदा प्रत्यक्ष नहुँदा NCEll लाई पुगेको छ । NTC बाट नेट चलाउदा भन्दा धेरै महंगो NCEll को भएको गुनासाहरू आएका छन् ।
विगत लामो समय देखि नै यस्ता समस्या उपर स्थानीय बासिन्दाले भन्दै आएका छन् तर नेपाल टेलिकमले कुनै वास्ता नगरेको देखिएको छ । पटक-पटक भन्दा समेत कुनै ध्यान दिन सकेको छैन । यो कमजोरी कसको टावरमा बस्ने क्रमचारीको वा नेपाल टेलिकमको ।
नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर तथा साइन्स इन्फोटेकका सल्लाहकार डा. राम बहादुर बोहरा भन्नहुन्छ, ”हिजोदेखि अहिलेसम्म फेसबुक चलाउदा मेरो ५०० जति खर्च भइसकेको छ । यो रकमले मलाई ५ दिनलाई पुग्थ्यो थियो” । यसरी NCEll ले फाइदा उठाएको देखिन्छ ।
← ब्लड प्रेशरबारे बरिष्ट डाक्टर राम बहादुर बोहराको महत्वपूर्ण सुझाव
दमको रोगीले के खाने के नखाने ? →